कसैकै लहडमा अधिवेशन सार्न पाइदैन, त्यस्तो प्रयास नगरियोस : कुल आचार्य, अध्यक्ष प्रत्याशी « Janata Times
काठमाडौं, २९ भदौ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवाशिय नेपाली संघ केन्द्रलाई बिभिन्न ठाउँमा धाँधली भएको भन्दै परेको उजुरिका आधारमा स्पष्टिकरण सोधे पछी संस्था भित्र मन्द गतिमा देखिएको विवाद अहिले एकाएक चुलिएको छ । संस्थापन पक्षले अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले संस्थामा राजनीति घुसाएको आरोप लगाइरहेका छन ।
शक्तीको प्रयोग गरेर संस्था भाड्न खोजेको उहाँहरुको दावी छ । त्यही पक्षले के पनि भनेको छ भने आचार्य पक्षले चुनाव हार्ने डरले अधिवेशन सार्नका लागि दवाव दिइरहेको छ । संचारकर्मी संग गरिएको कुराकानीमा आचार्यले भने– कुनै पनि बहानामा अधिवेशनको मिती सार्न पाइदैन । भनेकै समय र मितिमा अधिवेशन हुनु पर्दछ ।
के को आधारमा भन्नु भएको छ मलाई थाहा छैन । म तपाईंलाई के भन्न चाहन्छु भने संघ भित्र भएको ज्यादती, प्रतिनिधि चयनमा भएको अनियमितता, बिधान मिचिएका कुराहरुलाई तपाईंहरुले पनि खोजेर हेर्नुपर्‍यो । त्यसपछी बल्ल गर्नुहोला राजनीतिको कुरा । तपाईंले मैले एनआरएनमा गरेको विगतको कामलाई हेर्नुस् । मैले कहाँनेर आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थ र गलत ठाउँमा संस्थालाई प्रयोग गरें । जसले पद्दतीको चरम दुरुपयोग गरेको छ उसैले नै गल्तिलाई ढाकछोप गर्नका लागि अरुले राजनीति मिसाए भनिरहेको छ । पहिला त कसले गल्ती गर्‍यो भन्ने कुरालाई मुल्यांकन गरेर हेरिदिनुस् । जसले गल्ती गरेको छ उतैबाट नै राजनीतिक रंग लगाउने प्रयास भएको छ । यसमा मेरो घोर आपत्ति छ ।
संसारभरिका धेरै देशमा अनियमितता भए पछी धेरै साथीहरुले एनआरएन केन्द्रमा नै ईमेल र उजुरीहरु गर्नु भएको रहेछ । त्यस्ता अनियमितता भएका मुलुकहरुको समस्या समाधान गर्न उपाध्यक्ष समेतहरुले पनि निकै अनुरोध गर्नु भएको रहेछ । बिधान मिचेर अनियमितता गरिएको छ केन्द्रले छनविन गरोस भनेर पटक पटक भनिएको रहेछ । केन्द्रले कुनै अग्रसरता नदेखाएर बेवास्ता गरेपछी उहाँहरुले परराष्ट्रमा उजुरी दिनुभएको रहेछ । तर कुल आचार्यले निवेदन हाल्न लगायो भनेर मलाई बद्नाम गराउन खोजिएको छ । अती भए पछी त्यो अतीको पराकाष्ट बाहिर निस्केको हुनु पर्दछ । र, मलाई के लाग्छ भने नेतृत्वले आफ्ना कुराहरुलाई बेवास्ता गरेपछी केही साथीहरु परराष्ट्र जानु भएको हो भन्ने मैले सुनेको हुँँ । म फेरी पनि के भन्न चाहन्छु भने कुल आचार्यले परराष्ट्रमा न त कुनै निवेदन दिएको छ न कुनै दबाब । यसरी परराष्ट्रसम्म उजुरी पुर्‍याउने मुख्य दोषी त नेतृत्व नै हो । किन भने संस्थालाई उनिहरुले नै मर्यादित बनाउन सकेनन । बिधान मिचेर तोकिएको समय भन्दा पछाडि गएर सदस्यता बितरण गर्ने, तोकिएको समयभन्दा पछी गएर प्रतिनिधिहरुको हेरफेर गर्ने, उपाध्यक्ष र सदस्यहरुकै गुनासाहरुमा कुनै सम्बोधन नगर्ने अनी कोही परराष्ट्र मन्त्रालयमा किन गयो भने कुल आचार्यलाई प्रश्न गर्ने । कतीबिधी अमिल्दो छ होइन रु मलाई दोष लगाउनु भन्दा पहिला हामीले गल्ती गर्यौ कि गरेनौं भन्ने कुरा पहिला नेतृत्वले सोचोस भन्ने म अनुरोध गर्दछु ।
यसलाई कसरी हस्तक्षेप भन्न मिल्छ रु गल्ती अनियमितता भए पछी अभिभावकले के भन्छ त्यही हो गल्ती सच्याउ, अबदेखी गल्ती नगर भनेको त होला नि । तथापी म निवेदनकर्ता नभएको हुनाले मैले धेरै बोल्ने आधार रहँदैन । तर के लाग्छ भने अनियमितता भएका कुरा, बिधान विपरित नियमावली बनाउने कुरा, धाँधली भएका कुराहरु सच्याउँ । अबदेखी त्यस्तो नगर बन्नु कसरी हस्तक्षेप होला र । कुनै पत्रकारले अथवा कोही स्वतन्त्र ब्यक्तिले एनआरएन भित्र धाँधली भयो, बिधान मिचियो, सच्याउ भन्न पाउँछ । यो हस्तक्षेप लाग्दैन हामीलाई भने परराष्ट्र त एनआरएनको अभिभावको हो । गल्ती नगर भन्दा कसरी हस्तक्षेप हुन्छ रु त्यो त खवरदारी मात्रा हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा । म पुनस् के भन्छु भने हामी बिचका समस्या त्यहाँसम्म पुग्ने अवस्था किन बनाइयो रु नेतृत्वको अक्षमता होइन यो । तथापी मन्त्रालयले यो संस्थालाई चुनाव हार र जितको माध्यम नबनाइयोस भन्ने मनशाय राखेको हुनु पर्दछ ।
हामीले भर्खरै चुनाव भएपनि अत्यधिक बहुमतले जित्छौं । हाम्रो पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिएको छ । हार्ने अवस्था आएपछी प्रतिनिधि चयनमा कसले धाँधली गरिरहेको छ भन्ने कुरा छर्लंङ्ग देखिएको छ । चुनाव त हामीले जितेका छौं । तर अहिलेको आवाज बिधी बिधानको पालना हुनुपर्छ भन्ने हो । चुनाव हार्ने भएपछी अर्को पक्षले कसरी गडबड गरेको छ भन्ने कुरा त सबैले देखेकै छौं नि होइन र १
मलाई लाग्छ अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियामा राम्रोसँग प्रतिनिधि चयन भएको छ तर यि देशमा बिबाद किन देखाइयो उनिहरु सँग प्रश्न गरिदिनुहोला । हाम्रा १७(१८ वटा देशमा चुनाव भएको छ एनसीसीको । अहिले अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले मात्र २५ प्रतिशतका लागि चुनाव गर्नुपर्ने अरु देशहरुले २५ प्रतिशतको चुनाव गर्नु नपर्ने हो र ? यदी विधानको पालना गर्ने हो भने सबै देशमा त्यो २५ प्रतिशतका लागि चुनाव गरौं । किन एकरुपता नगरेको ? तपाईंहरु विधान विपरित कार्य गर्ने अनी बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया विवादित देश भन्ने रु किन देश अनुसार छुट्टाछुट्टै नियम रु म संघका सबैलाई दोष लगाउन चाहन्न । तर केही ब्यक्ती छन् जसले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि पुरै संस्थालाई बद्नाम गराइरहेका छन् ।
तपाईं नेताका घर घर जानुहुन्छ भन्छन १ नत्र के गरेर बसिरहनु भएको छ काठमाडौंमा ?
कसले भन्यो हामीले सार्न खोजेका छौं भनेर । हामी त त्यही कुरामा अडिग छौं, कुनै पनि हालतमा तोकिएको समय भन्दा पछाडी अधिवेशन सार्न हुँदैन । भएका गल्ती, अनियमितताहरुलाई छिटो भन्दा छिटो समाधान गरेर संस्थालाई मर्यादित रुपमा अघी बढाउन जरुरी छ । कसैको लहडमा अधिवेशन सार्न पाइँदैन, त्यस्तो प्रयास नगरियोस् । एक मिनटपनि अधिवेशनलाई पर धकेल्ने हाम्रो मनशाय छैन । बरु समयमा अधिवेशन नगराउन षडयन्त्र भएको संकेत देखिएको छ । तपाईंले मलाई टार्गेट गरेर जुन कुरा सोध्नु भएको छ( म भन्छु गैर आवाशिय नेपाली संघको समयतालिका र आइसीसीको निर्णय अनुसार नै अधिवेशन हुनुपर्छ भन्नेमा मेरो अर्को मत छैन । तर कस्तो देखिएको छ भने समस्याहरु उत्पती गराएर अधिवेशनलाई पर धकेल्ने छल अन्त कतैबाट भएको छ ।
एनआरएनए अध्यक्षमा कुल आचार्यको उम्मेदवारी घोषणा, यस्तो छ अठोट (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, असोज १० । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी अध्यक्षका लागि कुल आचार्यले उम्मेदवारी
गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्षमा डा.केसीको उम्मेदवारी यसकारण आवश्यक
काठमाडौं ।गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को स्थापना कालदेखि नै डा.बद्री केसी आवद्ध हुनुहुन्छ । पहिला रुसमा
एनआरएनए अध्यक्षमा रविना थापाको उम्मेदवारी घोषणा,नागरिकता र श्रमिक अधिकार मुख्य एजेन्डा
काठमाडौँ, असोज ८ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्ष पदमा रविना थापाले उम्मेदवारी घोषणा
एनआरएन चुनाबमा कूल आचार्यको पक्षमा उभियो कांग्रेस
काठमाडौं, असोज ६ । गैरआवासीय नेपाली संघको आसन्न महाधिवेशनमा कूल आचार्यलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्ने
११ देशमा राजदूत पदपूर्ति नगरी देउवा सरकारले उल्टै फिर्ता बोलायो थप १२ देशका राजदूत
सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतलगायत १२ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको